Chii chinosanganiswa muSeO Audit Cost?
Nguva pfupi kana gare gare, muridzi webhizimisi wese anoziva kukosha kwekuita seO audit. Muchikamu chedu chemazuva ano, tichatsanangura kuti SEO yakanyatsoongorora chii. Uyewo, tichaona kana iwe uchida imwechete uye uchifunga nezvekudhura kwayo. Saka, pedyo nechokuita. Tarisa kuti chii chinowanikwa muSOO mari yekuongorora pasi apa.
SEO Audit: Inoshanda Sei?
Kusiyana nemushumo wechechi, kuongorora kwe SEO kunoitwa nekuda kwekutengesa chete.
Kuongororwa kwakaitwa SEO kunopa huchenjeri huri nani muwebsite yako, pamapeji ewebhu, uye nemugwagwa mukuru. Semalt nyanzvi dzinokurudzira kuti iwe uite cheki chakaita gore rimwe nerimwe kana pakutanga kwega purojekiti.
Nhanho dzepamusoro dzeWebhu Audit
Kuziva Vasina Kuita Nzvimbo Dzavo Dzako
nzira yakakwana yekuona zvikamu zvipi zvewebsite yako inoshanda zvakanaka uye izvo zvinoda kuwedzerwa. Iwe unogona kuchengetedza nzvimbo dzakanaka kusvika pakuona apo uchivandudza nzvimbo dzisina simba dzewebsite kuti uburure nzvimbo dzako. Mharidzo yakazara, in-depth data analysis, uye zvinokurudzirwa zvinowanzobatanidzwa mumutengo we SEO wokuongorora. Zvose zvinobatsira pakuvandudza nzvimbo yako yekushanda.
Icho Chinopfuura Chaizvo Chinyorwa Chinyorwa Chinyorwa
Mukuwedzera pakutsanangura yako peji peji SEO, kugadziriswa kwe SEO kuchaongororawo peji-peji uye teknolojia SEO. Yokutanga, pane-peji SEO, kazhinji inosanganisira mazwi makuru, URLs, headers, uye meta tags analysis. Kunyange zvazvo zvikamu zviviri izvi zvichitaura pasi rako newebsite usability.
Vaya vanofunga kurongedza zvose izvi ivo pachavo vanofanira kufunga kuti iyo yose inotora maawa. Zvichida, iwe hauna nguva kana chido cheizvozvo. Izvi zvinoreva kuti iwe unoda mumwe munhu uyo ​​achaita sarudzo yakadaro kwauri. Unyanzvi SEO makambani anogona kukubatsira nazvo.
Chinhu Chakanaka Chingawanikwa Kutsvaga Engjini Zvisikwa
Kuongorora kwe SEO kunonyanya kudhura kuwana nzvimbo panzvimbo yekuwedzera. Iwe unogona kubva uita zvigadziridzo zvekusununguka kana zvebhadharo yakaderera pane zvekutengesa uye zvinotsigirwa zvigadzirwa. Kubvira ipapo, unogona kuvaka vateereri vako zvachose. Iwe unosundira nzira yako mukutsvaga kweGoogle, uchibatsira rako raunogona kuwana pamberi pezvimwe zemaziso. Kuwana pamapeji mapamba maviri emigumisiro yekutsvaga kweGoogle kunoreva kuti vanhu vazhinji vanokuona.
Hauna chokwadi chokuti uri kushandisa mitsara inokosha yezvinyorwa? Hapana chikonzero chokufunganya! Iko kuongorora kwe SEO kuchakurumidza kukuudza izvozvo. Zvinogona kuchinja mazwi enyu ezvinyorwa nguva dzose kana iwe uchida kuve nechokwadi kuti iwe unotungamira kune chinangwa chevateereri.
Ndiyo Nguva Yakakwirira Kuti Uwane SEO Audit!
Kuwana SEO kuongorora kwewebsite yako nguva dzose kune chisarudzo chikuru. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti iyo yose yakanyanyisa yakadzika kupfuura kungotarisa pawebsite yako mazwi. Mukuwedzera pakurondedzera kana uri kushandisa mazwi akadii ezvakakosha kune vateereri vako, SEO nyanzvi ichakutaurira kana yakagadzirirwa zvakanaka. Uyu ndiwo mukana wakaisvonaka wekuti uone kuti pane zvakakosha zvehuwandu hwehutano hunodzokera kunzvimbo yako.
Nokuita SEO kuongorora nguva dzose, iwe uchakwanisa kumira pamakwikwi ako. Zvakare, SEO yekuongorora ndiyo nzira yakakwana yekusimudzira unhu hwako mumasangano ehupfumi sezvo inopa ruzivo rune ruzivo rwekuita kuti vashandi vako vakuwanire iwe paunenge uchida ivo Source .